नेप्से स्थिर : पर्ख र हेरको अवस्थामा लगानीकर्ता
असार ३०, काठमाडौं । साताको चौथो कारोबार दिन बुधवार नेप्से परिसूचक स्थिर भएको छ ।
यस दिन परिसूचक शून्य दशमलव शून्य ४ प्रतिशत अर्थात १ दशमलव शून्य १ अंकले बढेर २ हजार ८७२ दशमलव शून्य ५ विन्दुमा बन्द भएको हो । उता, सेन्सेटिभ इन्डेक्स भने शून्य दशमलव १४ अंकले घटेर ५३९ दशमलव ३८ विन्दुमा झरेको छ ।
२ हजार ८८२ दशमलव शून्य ७ विन्दुदेखि खुलेको बुधवारको बजार २ ८८३ दशमलव शून्य ५ विन्दुसम्म पुगेको थियो भने २ हजार ८५८ दशमलव २८ विन्दुसम्म झरेको थियो । पछिल्लो समयको शेयर कारोबारको अवस्थालाई हेर्दा लगानीकर्ताहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको देखिन्छ ।
देशको राजनीतिक अवस्थामा परिवर्तन साथै नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहँदा लगानीकर्ता बजारलाई प्रभाव पार्ने थप व्यवस्थाको पर्खाईमा रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । पछिल्लो समय नेप्से परिसूचकमा देखिएको उतारचढाब र कारोबार रकममा आएको न्यूनताले पनि लगानीकर्ताको मनोभाव पर्ख र हेरको अवस्थमा रहेको पुष्टि हुन्छ ।
बुधवार २१४ ओटा कम्पनीको रू. ५ अर्ब ६५ करोड ४५ लाख ७६ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । उक्त रकम बराबरको ४ करोड ४७ लाख ३६ हजार ५३० कित्ता शेयर कारोबार भएको हो । यो दिन अघिल्लो कारोबार दिनको भन्दा कारोबार रकमसँगै कित्ता पनि बढेको छ । मंगलवार रू. ५ अर्ब ५४ करोड ६३ लाख ५६ हजार बराबरको १ करोड २३ लाख ४८ हजार ३८९ कित्ता शेयर कारोबार भएको थियो ।
यस दिन सबैभन्दा बढी गोर्खाज फाइनान्सको शेयर कारोबार भएको छ । उक्त कम्पनीको रू. २९ करोड ४७ लाख ६९ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको हो । सर्वाधिक रकमको कारोबार भएको कम्पनीको शेयरमूल्य यस दिन प्रतिकित्ता रू. १० ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. १ हजार १८० पुगेको छ । प्रतिकित्ता रू. १ हजार २२० मा खुलेको कम्पनीको शेयरमूल्य न्यूनतम रू. १ हजार १५१ सम्म झरेको थियो ।
बुधवार जलविद्युत् समूहका लगानीकर्ताहरुले सर्वाधिक कमाएका छन् । यस दिन जलविद्युत् समूहको परिसूचक सर्वाधिक २ दशमलव ७१ प्रतिशतले बढेको हो । त्यस्तै वित्त समूहको १ दशमलव ४८ प्रतिशत, लगानीको शून्य दशमलव ७२ प्रतिशत, म्युचुअल फण्डको शून्य दशमलव ३४ प्रतिशत र होटल्स तथा पर्यटन समूहको शून्य दशमलव २२ प्रतिशतले परिसुूचक बढेको छ ।
यो दिन बैंकिङ्ग र व्यापारिकको शून्य दशमलव ३२ प्रतिशत, विकास बैंकको शून्य दशमलव २४ प्रतिशत, निर्जीवन बीमाको शून्य दशमलव ५८ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधनको शून्य दशमलव २५ प्रतिशत, अन्यको शून्य दशमलव ४८ प्रतिशत, लघुवित्तको शून्य दशमलव ३७ प्रतिशत र जीवन बीमाको शून्य दशमलव १९ प्रतिशत परिसूचक घटेको छ ।
जलविद्युत समूहको परिसूचक सर्वाधिक बढेको यो दिन हिमालयन पावर पार्टनरको शेयरमूल्य सर्वाधिक ८ दशमलव १० प्रतिशतले बढेको छ । कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ३४ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. ४५४ पुगेको हो ।
त्यस्तै नेपाल फाइनान्स र कालिका पावरको शेयरमूल्य एउटै अनुपात ७ दशमलव ७१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
नेपाल फाइनान्सको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ४० ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. ५५९ र कालिका पावरको प्रतिकित्ता रू. ३१ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. ४६७ पुगेको हो ।